EMC KUEDZA MABASA
EMC Scheme Dhizaini
Maitiro ese eEMC uye nerutsigiro rwehunyanzvi rwekutanga dhizaini yekutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira, uye nekupa zvakakwana mareferenzi dhizaini uye ehunyanzvi magwaro.Pa pa-saiti technical technical uye yakasarudzika chigadzirwa kugadzirirwa kubatsira vatengi kuvandudza, kwesainzi uye inonzwisisika gadziriso yemasssa.
Inogona kuyedza yeEC, FCC, 3C uye mamwe mapurojisiti mapurojekiti.Uye murabhoritari zvakare yakagadzirirwa zvemagetsi zvemagetsi bvunzo michina, inogona kuyedza dzakasiyana siyana dzemotokari kumberi zvikamu.Tinopa yemagetsi magetsi kuenderana kuyedza sevhisi, ndapota ita musangano pamberi.
Zvekuitisa, radiation uye zvimwe zvinhu zvekuyedza zvinopfuura muyero wekuyedza sampuli kuisa pamberi pekuvandudza mazano uye nzira dzekutsigira, zviyero, zvinobatsira vatengi kudzikisira kupindirana kwezvigadzirwa, kuti vazadzise chinangwa chekupasa bvunzo.
EMC Lab Rease
Zvemutengi zvekutanga zvekufanotaura bvunzo uye mushure mekundikana kwemuyedzo.Laboratory inogona kubhadharirwa mutengi kune akawanda kusimbiswa, masampuli anogona kutumirwa zvakananga, kana vatengi pachavo vanouya kune saiti bvunzo, ndapota ita musangano pamberi.
ESD electrostatic buditsa bvunzo michina
Akaitisa anti-kupindira bvunzo michina
danda nguva nenguva kanyanga (30MHz-1GHz)
Kuitisa bvunzo mugamuchiri (9KHz-3GHz)
Radiation bvunzo spectrometer (10Hz-26.5GHz)